Maamulka Koofurgalbeed oo ka hadlay dad ka badan 30 ruux oo u dhintey biyo ay cabeen – STAR FM SOMALIA
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu ka hadlay dad ku dhintay kadib makii ay cabeen biyaha warbiyood la tuhunsan yahay in la sumeeyay deegaanka Masuubiye oo u dhaxeeya Awdiinle iyo Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay.
Inta la xaqiijiyay ilaa iyo 30 Qof ayaa ku dhimatay war-biyoodkan la sumeeyay, kuwaas oo isugu jira haween, carruur iyo dad da’ah sida ay sheegeen mas’uuliyiinta Koonfur Galbeed.
Wasiirka Hub ka dhigista iyo dhaqan celinta Maamulka Koonfur Galbeed Xuseen Xasan (Eelaay) ayaa waxa uu sheegay xaalada Dadka ku nool Masuubiye in ay tahay mid adag, loona baahan yahay in wax loo qabto.
Maamulka Koofurgalbeed ayaa sidoo kale sheegay in toban ruux ay xaaladoodu liidato iyagoo ka mid ah dadkii isticmaalay ama cabay biyaha laga soo dhaamiyay War-biyoodka sumeysnaa.
Lama oga illaa iyo hadda cida sumeysay warbiyoodkan iyadoo ay ku soo beegantay xilli jiilaal adag uu ka jiro deegaanada Koofurgalbeed Soomaaliya.